Dowladda Soomaaliya Oo Diiday Ergayga Midowga Afrika Usoo Magacaabay Dhexdhexaadinta Arrimaha Doorashada – somalilandtoday.com
(SLT-Muqdisho)-Soomaaliya ayaa diiday magacaabista iyo inuu dalkeeda yimaado Wakiilka sare ee uu Midowga Afrika usoo magacaabay Soomaaliya, John Mahama, si uu u hogaamiyo wadahadalada dhexdhexaadinta arrimaha doorashada.
Dowladda Soomaaliya ayaa xustay in ayna kalsooni ku qabin madaxweynihii hore ee Ghana sababa la xidhiidha xidhiidhka uu la leeyahay dowladda Kenya.
Warqad ku taariikheysan 10-ka May, ayaa Wasiirka Arimaha Dibada Maxamed Cabdirisaaq wuxuu ugu sheegay Gudoomiyaha Gudiga Midowga Afrika Moussa Mahamat, in Mahama aan lagu soo dhaweynayn Soomaaliya, imaatinkiisana in aanu wax qiimo ah soo kordhineyn maadaama horeyba heshiis wada hadal loo galay.
“Runtii waa wax lala yaabo in murashax xidhiidh dhow la leh hoggaanka Kenya ay doorteen Midowga Afrika si loo fududeeyo wada-hadallada ku saabsan muranka siyaasadeed ee ay qayb ka yihiin kuwa ay hoggaamiyeyaasha Kenya taageereen,” ayaa lagu yidhi warqadda qeyb ka mid ah.
Dowladda Federaalka waxa ay xustay inay kala laabaneyso taageerada Wakiilka Sare ee Midowga Afrika.
Balse, mucaaradka ayaa soo dhoweeyay isla markaana taageeray magacaabista Mahama si uu u hogaamiyo wadahadalada doorashooyinka.
Si kastaba ha ahaatee, Ilo wareedyo ayaa sheegay in Midowga Afrika aanu ka laaban doonin go’aankiisa ku aaddan magacaabista iyo dirista Mahama ee loo dirayo Soomaaliya.